रबि लामिछाने र निकिता पौडेलले लाग्यो को’रोना ! हाम्रो चिन्ता नगर्नु भन्दै बोले रबि.. | Public 24Khabar
Home News रबि लामिछाने र निकिता पौडेलले लाग्यो को’रोना ! हाम्रो चिन्ता नगर्नु भन्दै...
रबि लामिछाने र निकिता पौडेलले लाग्यो को’रोना ! हाम्रो चिन्ता नगर्नु भन्दै बोले रबि..
पानी आउँने लक्षणपनि छैन । यससँगै निर्धारित समयभन्दा तीन महिनाअगावै काम सकेर बोनस खाने ठेकेदार कम्पनीको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको छ ।अन्ततः पानी पथान्तरणको वैकल्पिक संरचना (अस्थायी डाइभर्सन) बाट सुरुङमा पानी पठाएर २०७७ को दशैँसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने खानेपानी मन्त्रालयको घोषणा घोषणा मै सीमित भयो ।
शाक्य भन्नुहुन्छ, “लकडाउनमा पूर्ण क्षमतामा काम हुन पाएन ।करिब ४५ प्रतिशत मजदुरले मात्रै काम गरे, अरू घर फर्किए । निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा पनि ढिलाइ भयो । ” अहिले मेलम्चीमा अस्थायी डाइभर्सनको काम भइरहेको छ । त्यस बाहेका सुरुङ परीक्षण र हेडवक्र्सको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । सुरुङ फिनिसिङको एक वर्षे सम्झौताको म्याद अक्टोबरमा सकिएको छ ।
Previous articleमलेसिया सरकारले अबै*धानिक कामदारलाई बैधानिक हुन पाउने ब्यवस्था ल्याउदै
Next articleधान खेतमा फालिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो धेरै स्मार्ट लाइसेन्स, कस्ले गर्याे एस्तो ?